Ahoana no niforonan'ny ranomasina: tantara sy jeolojia | Meteorolojia tambajotra
ny fomba namoronana ny ranomasina
Portillo Alemanina | 11/05/2022 10:00 | Haibolantany
Nandritra ny tantara dia nanontany tena izy ireo ny fomba namoronana ny ranomasina. Tany am-piandohan’ny taonjato faha-XNUMX, dia noheverina fa zavatra nosintonina tamin’ny masoandro ny Tany sy ny planeta hafa. Ny sarin'ny tany dia manjelanjelatra ka mafana ary avy eo mihamangatsiaka tsikelikely. Raha vao nangatsiaka tsara mba hivaingana ny rano, dia nivadika ho rano ny etona ao amin'ny atmosfera mafana eto an-tany ary nanomboka nilatsaka ny orana. Taorian'ny taona maro nisian'ity orana mangotraka tsy mampino ity, miboiboika sy mirohondrohona rehefa midona amin'ny tany mafana, ireo koveta ao amin'ny tany marokoroko dia nangatsiaka tamin'ny farany mba hihazonana rano, nameno ary namorona ranomasina.
Izany tokoa ve no namoronana ny ranomasina? Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava izany amin'ny antsipiriany.
1 ny fomba namoronana ny ranomasina
2 orana any an-dranomasina
3 Takelaka tektonika
4 Mistery sasany momba ny fomba namoronana ny ranomasina
Resy lahatra ny mpahay siansa ankehitriny fa tsy avy amin’ny masoandro ny Tany sy ny planeta hafa, fa avy amin’ny poti-javatra nitambatra tamin’ny fotoana nivoahan’ny masoandro. Tsy nahatratra ny hafanan’ny masoandro mihitsy ny Tany, fa Nafana be ilay izy noho ny herin'ny fifandonan'ny poti-javatra rehetra namorona azy. Hany ka tsy nahafeno ny atmosfera na ny etona ny faobeny kely tamin'ny voalohany.
Na mitovitovy amin'izany koa, ny ventin'ity Tany vao niforona ity dia sady tsy manana atmosfera na ranomasina. Avy aiza izy ireo?
Mazava ho azy fa ny rano (sy ny entona) dia mifamatotra malalaka amin'ny akora be vato mandrafitra ny ampahany mafy amin'ny planeta. Mihamafana sy mihamafana ny ao anatiny rehefa mihamafy ny ampahany mafy amin'ny herin'ny sinton'ny tany. Ny entona sy ny etona dia esorina amin'ny fifandraisany amin'ny vatolampy teo aloha ary mamela ny zavatra mafy.
Nanimba ny Tany tanora ireo bubbles niforona sy niangona, fa ny hafanana navoaka kosa dia niteraka fipoahana volkano mahery vaika. Tsy nisy rano mitete na dia kely aza latsaka avy tany an-danitra nandritra ny taona maro. Toy ny etona rano izy io, mipoitra avy ao amin'ny crust ary avy eo mivaingana. Miforona avy any ambony ny ranomasina fa tsy avy any ambany.
Ny tsy eken'ny geolojista ankehitriny dia ny tahan'ny fiforonan'ny ranomasina. Nanjavona ve ny etona rehetra tao anatin’ny arivo tapitrisa taona teo ho eo, mba hitovy amin’ny haben’ny ranomasina ankehitriny hatramin’ny nisian’ny fiainana? Sa ve dia dingana miadana ny fitomboan'ny ranomasimbe ary tsy mitsaha-mitombo mandritra ny fotoana ara-jeolojika?
orana any an-dranomasina
Ireo izay mihevitra fa ny ranomasimbe dia niforona tany am-piandohan'ny lalao ary tsy miova ny habeny hatramin'izay dia nanamarika fa ny kaontinanta dia toa singa maharitra amin'ny Tany. Taloha, rehefa noheverina ho kely kokoa ny ranomasina. toa tsy dia lehibe loatra izy ireo.
Etsy an-danin’izany, ireo mino fa tsy mitsaha-miakatra ny ranomasimbe dia milaza fa ny fipoahan’ny volkano dia mbola mamoaka etona rano betsaka eny amin’ny rivotra: avy amin’ny vatolampy lalina ny etona, fa tsy ny ranomasina. Fanampin'izany, misy tendrombohitra any amin'ny Oseana Pasifika izay mety ho eny amin'ny haabon'ny ranomasina ny tampony fisaka, saingy an-jatony metatra ambanin'ny haabon'ny ranomasina ankehitriny.
Mety hisy marimaritra iraisana. Voalaza fa na dia miakatra aza ny ranomasimbe dia ny vesatry ny rano mitsangana no mampirodana ny fanambanin’ny ranomasina. Izany hoe, araka io vinavina io, dia nihalalina ny ranomasimbe, saingy tsy nivelatra. Izany dia afaka manazava ny fisian'ireo lembalemba an-dranomasin'ny ranomasimbe ireo, ary koa ny fisian'ny kaontinanta.
Ny fiforonan'ny ranomasimbe eto an-tany dia vokatra ankolaka avy amin'ny fizotry ny convective ao amin'ny lamba mandrava ny crust. Izany rehetra izany dia manomboka amin'ny fanerena ataon'ny magma eny ambonin'ny tany. Io fanerena io aloha no mahatonga ny fihanaky ny tany, ary avy eo ny fahatapahan'ny tany. Na dia manana orientation mitsangana eo ho eo aza ny fanerena ataon'ny magmà, avy amin'ny axis ny fanerena ambony indrindra amin'ny magma. hery mitsivalana no avoaka izay mamaky ny crust. Vokatr'izany dia miforona ny triatra midadasika izay miitatra rehefa mandeha ny fotoana.
Rehefa misaraka tsikelikely ireo faobe crustal dia milentika tsikelikely ny tany ary miforona ny fahaketrahana lehibe (noho ny fisintonana ny tsindrin-tsakafo). Mitranga ny asan'ny volkano ao anatin'ireo fahatapahan-jiro ireo (izay efa misy magmà afaka mitsoaka), ary rehefa mandeha ny fotoana, rehefa mitombo ny sakany, dia feno rano izy ireo, farany dia miforona rano lehibe araka ny fahafantarantsika azy ireo. Toy ny ranomasina sy ny ranomasina. Rehefa voasaron’ny volkano ny volkano iray, dia lasa fanambanin’ny ranomasina izy io, ary ireo vongan-dranomandry manamorona ireo vaky dia antsoina hoe havoana afovoan-dranomasina. Ny rift dia faritra midadasika amin'ny fisokafana, fisarahana, triatra ary fissure amin'ny crust amin'ny tany.
Mistery sasany momba ny fomba namoronana ny ranomasina
Ny fiheverana fa feno rano ny tainkintana lavitra sy ny kometa dia mitaky dingana sarotra amin'ny herin'ny hery misintona eo amin'ireo planeta goavam-be sy ireo vatana selestialy ireo mba hitondrana azy ireo eto amin'ny orbitany lavitra. Laurette Piani sy ekipa avy amin'ny Foibem-pirenena momba ny fikarohana siantifika (CNRS, fanafohezan-teny frantsay) sy ny Oniversiten'i Lorraine (France) Nanandrana nampiseho fahafahana hafa naroso izy ireo hanazavana ny antony maha planeta manga azy.
Ny tany dia vita tamin'ny zavatra mifangaroharo avy amin'ny nebula izay niteraka ny rafi-masoandro. "Ankehitriny dia fantatsika fa ny planeta terestrialy, anisan'izany ny Tany, dia tsy niforona tampoka, fa nanangona avy amin'ny vatana selestialy an-jatony", hoy i Josep Maria Terri, mpanadihady lehibe ao amin'ny Vondrona Small Objects and Meteorites ao amin'ny Go Space Sciences Institute. CSIC).-IEEC), any Barcelona. "Ny zavatra mandrafitra ny tany dia hiforona akaiky kokoa ny masoandro, ary ny 80 hatramin'ny 90 isan-jato dia ho chondrites enstatite [izay misy mineraly betsaka indrindra] na mahazatra," hoy izy nanampy.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fomba namoronana ny ranomasina ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haibolantany » ny fomba namoronana ny ranomasina
Isan'andro aho dia miandry ny fandefasana amin'ny mailaka ity fahalalana mahaliana mifandraika amin'ny Planeta Manga mahafinaritra ity izay tsy maintsy tazomintsika ho salama ho an'ny taranaka ho avy... Fiarahabana feno fankasitrahana.